Rotterdam nke Holland America bụ ihe ngosi nka na-ese n'elu $4.1 nde
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Rotterdam nke Holland America bụ ihe ngosi nka na-ese n'elu $4.1 nde
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • omenala • Education • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Rotterdam nke Holland America bụ ihe ngosi nka na-ese n'elu $4.1 nde.
Holland America Line's Rotterdam bụ ụlọ ihe ngosi nka dị n'oké osimiri nwere ọrụ dị iche iche 2,645 sitere na $ 500 ruo $ 620,000 nke na-agafe oche, ọnụ ụlọ ọha na ụlọ steeti.
Ihe karịrị iberibe 2,500 sitere na ọtụtụ ndị nka zuru ụwa ọnụ na-eme ka ime ime Rotterdam dịkwuo mma.
A na-eji mkpokọta nka Rotterdam kpọrọ ihe karịrị nde $ 4.1 ma kwadoro ya site na YSA Design nke Oslo na ArtLink dabeere na London.
Ihe karịrị obodo 37 bụ ndị ndị nka Rotterdam nọchiri anya ya, yana ọnụ ọgụgụ kacha ukwuu nke ndị nyere aka sitere na Netherlands, United States na United Kingdom.
Nweta Holland America Ọ dịla anya a na-ewere ụgbọ mmiri dị ka ụlọ ọrụ nka na-ese n'elu mmiri n'ihi nnukwu nchịkọta nke iberibe ihe ngosi nka mara mma. Mgbe ole Rotterdam na-esetịpụ ụgbọ mmiri na nke mbụ Ọktoba 20, 2021, ndị ọbịa na-abanye maka njem na-akwụghachi ụgwọ anya na ụfọdụ n'ime ihe na-akpali akpali, dị egwu na obi ike n'ime ụgbọ mmiri - gụnyere ọrụ akụkọ ihe mere eme na ihe ncheta sitere na ụgbọ mmiri nwanne gara aga hụrụ n'anya.
RotterdamA na-eji mkpokọta nka ọnụ ahịa karịa nde $ 4.1 ma kwadoro ya site na Oslo nke YSA Design na ArtLink nke dị na Lọndọn, onye rụkọrọ ọrụ na ụlọ ọbịa a na-akwanyere ùgwù atelier Tihany Design. Ihe si na ya pụta bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke dị n'oké osimiri nwere 2,645 iberibe ọrụ dị iche iche sitere na $ 500 ruo $ 620,000 nke na-agafe oche, ọnụ ụlọ ọha na ụlọ steeti.
Ihe karịrị obodo 37 nọchitere anya ya RotterdamNdị na-ese ihe, nwere ọnụ ọgụgụ kacha ukwuu nke ndị nyere aka sitere na Netherlands, United States na United Kingdom. Ndị na-ese ihe na-esikwa na Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Republic of Korea, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey na Ukraine.
Ọtụtụ n'ime akụkụ ndị ahụ na-elekwasị anya na ntụrụndụ, na-egosi isiokwu nke egwu, ịgba egwu na mmegharị ahụ, na-akpa akụkọ ụgbọ mmiri banyere "ụda njem ụgbọ mmiri ọhụrụ" n'ime nka. Ọrụ ndị a dị n'ọtụtụ mgbasa ozi, gụnyere foto, eserese, mgbasa ozi agwakọta, ihe atụ, mbipụta na ihe ọkpụkpụ.